PressReader - Ilanga: 2017-09-07 - UShembe akashongo ukuthi wammukela abachaphi benhlamba
UShembe akashongo ukuthi wammukela abachaphi benhlamba
Ilanga - 2017-09-07 - Imibono - T.M.Ngubane EGOLI
MHLELI: Ake ngiqale kanje, uMprofethi (Isaiah) Shembe wathi: “Kunenkosi yalo msebenzi engiwenzayo, iyokushintsha engakufuni uma seyifika. Kwenzekile, abanomlando kuleli bandla lamaNazaretha bayavuma ukuthi ikhongo kaligidi entabeni yomhlangano.
Lokho kwashintshwa yiNkosi yaseKuphakameni, iNkosi Galilee “iLanga” Shembe, okuyiyona eyapholofitha yathi kuza isikhathi lapho niyodlula la nithi yayiyinhle into eyayilapha. Yiyona futhi eyakhuluma ngomuzi engingawazi ngoba kangikhonzi kuleli bandla engilithanda ngamasiko, yathi: “Kunomuzi enginilungisele wona maNazaretha, uyalenga ngezintambo ezine, thina boShembe singaphosa itshe lifike. Yiyona iNkosi iLanga eyaqinisekisa ukuthi ngeke kuphele ukuPhakama “ngoba uKuphakama yithi boShembe laba!”
Kayishongo ukuthi yimi uShembe, yathi “yithi”. Umbuzo wami uthi nihlu- kaniswa yini ngoba nifundisiwe ukuthi wonke amaNazaretha makabe njengebumba likasemende. Nifundisiwe ukuthi lapho bebuthene khona begcina iSabatha, akababheki ngamehlo kodwa ubabheka njengomakoti. Pho nikuthathaphi ukwahlukana na?
Uma uNyazi (iNkosi Mduduzi Shembe), iMisebeyelanga (iNkosi Vela Shembe), iNcoyincoyi (iNkosi Vukile Shembe) njalo njalo ngokwahlukana kwabo abantwana baBhombela, nikwe-
nzelani ukubachapha ngenhlamba bebe bonke besaphethe imithandazo kaKrestu eniyifundiswe nguMprofethi uShembe ngolimi lwenu? Dutoronomi 18:18; nikwenzelani ukusihlekanisa nabezizwe na?
Abantwana bakaNkulunkulu bayathandana, baqapheleni osomathuba, sesiside isikhathi bezama ukuhlakaza umsebenzi kaNkulunkulu awuphathise uShembe. Kakukhona okwethu ukwazi ophathisiwe, kodwa uthi uMprofethi kaThixo lapho bebuthene khona begcina iSabatha - hhayi bethuka inhlamba - akababheki ngamehlo akhe, ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe kodwa abeke indlebe yakhe ukwamukela intokozo yokuhlabelela kwabamesabayo.
Uyabona-ke, akakwamukeli ukukloloda nokuklabalasa kwamashinga nabachaphi benhlamba, kungakhathalekile ukuthi uyibhekise kuluphi uhlangothi.
Lithi izwi: “Uma omunye wenu eduka eqinisweni omunye akam’buyise.”
Uyazi yini ukuthi ukubuyisa isoni ekwedukeni kwaso kusindisa umphefumulo wakho, kwesulwe nezono zakho na? Hhayi! eyamakholwa-ke leyo nami ake ngiminye lesi sitshodo sami ngilale phansi.
Kungaze kuthiwe sengidakiwe kanti vele ngidakiwe kodwa angidakelwa ezinganeni zikaMayekisa.